विधार्थी केन्द्रित राजनीति कहिलेसम्म ? – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
विधार्थी केन्द्रित राजनीति कहिलेसम्म ?
February 2, 2017 February 2, 2017 सरोकार संवाददाता
माघ २०- मानिसले जहिले पनि अवसर खेजिरहेको हुन्छ । अवसर प्राप्तिको लागी चाहिने प्रमुख तत्व भनेकै शिक्षा हो । उज्वल भविष्यको सपना बोकेर दिनहुँ हजारौको संख्यामा विद्यार्थीहरु उपत्यका भित्रिने गर्दछन् । यसैको फाइदा उठाउँदै विभिन्न रजनैतिक दलका नेताहरुले शिक्षण संस्थालाई राननिति गर्ने थलो वनाएका छन् ।
इन्डोनेसियामा १३० यात्री सवार विमान धावनमार्गमै दुर्घटना